Farmaajo oo Mursal fariin ugu dhiibay Mucaaradka | Keydmedia
Farmaajo oo Mursal fariin ugu dhiibay Mucaaradka
Kulanka waxaa dalabaday Gudoomiyaha Gollaha Shacabka oo la kulmay madaxda Madasha Xisbiyada Qaran, isagoo u gudbiyay fariin uu usoo dhiibay Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xarunta Madasha Xisbiyada waxaa ka dhacay maanta kukan gaar ah oo ay isagu yimaadeen gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal iyo Madaxweyniyeyaashii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif.
Waxay ka hadleen xaalada dalka uu marayo, muranka doorashooyinka ka taagan iyo qodobo kale oo ku qotoma khilaafka siyaasadeed ee Farmaajo kala dhaxeeyay Mucaaradka iyo Maamul Goboleedyada dalka, oo xal loo waayay.
Warar hoose oo Keydmedia Online ay heshay ayaa sheegay in gudoomiye Mursal uu Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif u gudbiyay fariin uu ugu soo dhiibay Madaxweyne Farmaajo, taasi oo aan la ogeyn waxa ay xambaarsan tahay. Madaxdii hore ayaa Farmaajo ku dhaliilay inuu ka gaabiyay la shaqeynya saamileyda siyaasadda dalka.
Ma ahan markii ugu horeeysay oo hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaranka iyo Guddoonka Golaha Shacabka u kulmaan.